मंसिर १४, काठमाडौं । आन्तरिक उत्पादनमा भारी गिरावट आएको भन्दै भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा देखिएको छ । गत असोज १२ गते भारतको केन्द्र सरकारले प्याजको आन्तरिक माग धान्न भन्दै एकाएक निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
भारतको केन्द्र सरकारको निर्णय लगत्तै उकालो लागेको प्याजको मूल्य हाल कालिमाटि फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिको थोक मूल्य प्रतिकिलो रू.२२० सम्म पुगेको छ । त्यस्तै, प्याजको खुद्रा मूल्य प्रतिकेजी रू.३०० भन्दा माथि पुगेको छ । पछिल्लो एक सातामा लगातार बढ्दै प्याजको मूल्य आकासिएको हो ।
यस्तै, खुद्रा बजारमा प्याजको मूल्य पसलै पिच्छे फरकफरक तोकिन्छ, यही कारणले खुद्रा बजारमा प्याजको अधिकतम मूल्य रू. ३०० पुगेको छ । कालिमाटि फलफूल तथा तरकारी बजार समितिमा दैनिक ८० देखि ९० टन प्याज भित्रिन्छ । तर, यति प्याजले मात्रै माग धान्न नसक्दा मूल्य आकासिँदै गएको कृषि तथा पुशपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भारतले प्याजमा प्रतिबन्ध लगाएपछि आकासिएको प्याजको मूल्य तत्काल रोक्न सक्ने अवस्थामा नभएको बताए ।
उनले भने ‘यदी भारतले प्रतिबन्ध खुला गर्यो भने मूल्य घट्छ ।’
कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा चीनबाट पनि प्याज आयात हुँदै आएको छ । तर, चिनियाँ प्याजको आकार ठूलो हुने र स्वाद भारतीयको जस्तो नहुने भएकाले उपभोक्ताले रुचाएका छैनन् । सोही कारण चीनबाट आएको प्याज होटलमा खपत हुने गर्छ । आयात भइरहेको जानकारी भएपनि मन्त्रालयसँग कति परिमाणमा प्याजको आयात भइरहेको छ भन्ने जानकारी छैन ।
वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार व्यावसायीहरुले भारतबाट अनौपचारिक रुपमा प्याज आयात गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । ‘आयात गरिएको प्याजको मूल्य विभागलाई उपलब्ध गराउन व्यावसायीलाई अनुरोध गरिएको छ’, उनले भने ।
उनका अनुसार विभागले आवश्यक परे जुनसुकै समयमा अनुगमन गर्न सक्ने भएपनि अनुगमन गर्ने त्यस्तो कुनै योजना बनिसकेको छैन ।तर, प्याजको मूल्य घटाउन वा स्थिर राख्न विभागसँग कुनै ठोस योजना भने छैन ।
भारतबाट नेपाल भित्रिँदै गरेको १४ ओटा ट्रकको प्याज समातेको जानकारी व्यावसायीहरुले विभागलाई दिएका छन् । सोही कारण व्यावसायीहरु समस्यामा रहेको विभागको ठम्याई छ । आन्तरिक उत्पादनमा बढवा नदिएसम्म प्याजको मूल्य घट्ने छाँट नरहेको विभागको आँकलन छ ।
बजारमा बिचौलियाको प्रभाव र बदमासीले मूल्य बढाउन थप सहयोग पुरयाइरहेको उपभोक्ता संरक्षणकर्मीहरुको भनाइ छ । यस्तै, व्यावसायीले प्याज लुकाएर बजारमा अभाव देखाउँदै मूल्य बढाइरहेका छन् । सोही कारण पनि प्याजको मूल्य आकासिँदै गएको हो ।
भारतसँग सिमाना जोडिएका भन्सार नाकाबाट औपचारिक रुपमा प्याज आयात भएको छैन् । तर, खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै गैरभन्सार नाकाबाट प्याज दैनिक रुपमा नेपाल भित्रिरहेको छ, जसलाई खुला सिमानाको कारणले रोक्न नसक्ने अवस्था रहेको कृषि मन्त्रालय बताउँछ ।
यसअघि भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको एकै दिनमा नेपाली बजारमा प्याजको रू. ३० मूल्यबाट बढेर रू. १२० पुगेको थियो ।
[Nov 30, 2019 06:53am]
बिचौलियाको अचाक्लीलाई नियन्त्रण नगर्ने र आन्तरिक उत्पदनलाई प्रोत्साहन नदिने अवस्था रहिरहेसम्म हाम्रा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरुमा यस्तो हालत बारम्बार दोहोरिने क्रम जारी छ। जनताबाट चुनिएर बनेको भनिएको सरकारले यस्तो अवस्थालाई उच्च प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नु पर्ने हो।
लकडाउन थपिनेभएपछि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी शुक्रवार आईपीओ बाँडफाँट गर्दै
शेयर कारोबार बन्दको असर : व्यवसायिक रुपमै लाग्नेहरु तनावमा (भाग–१)
साउदी अरब–रुस वार्तामा ढिलाइसँगै घट्यो तेलको भाउ
विदेशबाट आएका ८२३, पालिकाको क्वारेन्टाइनमा १८ जना मात्र
गौरीफण्टा नाका हुँदै प्यूठान आएका युवाको पहिचान